ကျွမ်းကျင်ရာလိမ္မာ Expertise | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ကျွမ်းကျင်ရာလိမ္မာ Expertise
Posted by ဦးေၾကာင္ၾကီး on May 4, 2011 in Critic, Cultures, U.S. News, World News | 17 comments
ဓာတ်ပုံ (White House – P. Souza) ကို ကြည့်လိုက်ပါ။ ဘာထူးသလဲလို့….
ယနေ့ ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်မှာ အိုစမာ ဘင်လာဒင်ကို သုတ်သင်ခဲ့တဲ့ စစ်ဆင်ရေးကို အိမ်ဖြူတော်ကနေ တိုက်ရိုက်ကြည့်နေခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံကို သတင်းနဲ့အတူ တင်ထားတာတွေ့လို့ ပြည်တွင်းက ရွာသားများ တွေ့ရအောင် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းကိုလည်း ဒီကနေပဲ ခွင့်တောင်းပါတယ်။ အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမားဟာ နိုင်ငံသမတ၊ စစ်တပ်သေနာပတိချုပ် စတဲ့ ကမာ္ဘကို ကိုင်လှုပ်နိုင်အောင် ဩဇာအာဏာ ကြီးမားပေမဲ့ သူ့နေရာသူ သိပါတယ်။ ဘင်လာဒင်ကို ဖမ်းတဲ့ စစ်ဆင်ရေးကို တကယ်ကိုင်တွယ်သူ စစ်ဗိုလ်ချုပ်က အမိန့်ပေးခုံမှာ ထိုင်ပြီး သမတအပါအဝင် ဒုတိယသမတနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြိးများက ဘေးကနေ ပေးရတာပါ။
တိုင်းပြည်တပြည် တိုးတက်ဖို့ဆိုရင် လူတိုင်းလူတိုင်း ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်မှ၊ အားပေးသင့် ချီးမြောက်သင့်သူကို ချီးမြောက်မှ၊ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာဆိုတာကို တန်ဖိုးထားတတ်မှ ဖြစ်ပါမယ်။ မြန်မာပြည်မှာလည်း ကိုယ့်နေရာကိုယ်သိပြီး မဆိုင်တာ ဝင်မရှုပ်ကြဘူးဆိုရင် တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ လမ်းစဖြစ်မှာပါ…
ဓာတ်ပုံများကို ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းဆိုက်နဲ့ ကိုမိုးသီးဘလော့တို့မှ ရယူပါသည်။
အိုစမာ ဘင်လာဒင်ကို သုတ်သင်ခဲ့သည့် စစ်ဆင်ရေးအား အိမ်ဖြူတော်မှ ကြည့်ရှုနေသည့် သမ္မတ အိုဘားမားနှင့် တာဝန်ရှိသူများ။
ေအာင္ၾကဴးhas written 649 post in this Website..
သူတို့ နှိင်ငံတိုးတက်တာ ဒီလိုစိတ်ဓါတ်တွေရှိနေလို့ဘဲ…
တို့ဆီမှာကတော့ ဖုံးလျှောက်ရင်တောင် တ ယ က ရံဘုံငွေ..
ဆိုင်ကယ် ဦးတုပ် မဆောင်းလို့ အဖမ်းခံရ ရင်လဲ တ ယ က ရံဘုံငွေ..
ကျန်တဲ့ ဟာဆိုရင်တော့ ပြောမနေနဲ့…
စစ်ဆင်ရေးတာဝန်ခံ အမိန့်ပေးတဲ့လူတွေက laptop အစစ်တွေကို သုံးထားတာ တွေ့ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ..
ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ monitor သာ ကြည့်ပြီး ထိုင်နေကြရတဲ့ အမတ်များကို သနားမိတာ အမှန်ပါ
မော်နီတာကြည့်ပြီး မျက်စိဖွင့်လျှက်သား အိပ်နေတာလေးပါသေးတယ်လေ Dr ရဲ့ ။
အခန်း ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ လူတွေ စုပြုံပြီး ရပ်သူရပ် ထိုင်သူ ထိုင်နဲ့ ကျပ်ညပ်နေတာပဲ။ ဒို့ရွာကလောက် မခန်းနားဘူး။
အာဖျံ ကွီး says:
ကိုကြောင် တကယ်မြင်တတ်တယ်လို.ပဲ ထပ်လောင်း ချီးကျုးလိုက်တယ်ဗျာ …
ဟို ဘဘ ကိုတော့မပြောတော့ပါဘူး …
အာဖျံကွီးတို.ပဲ ကိုယ့်ဆိုင်ရာအလုပ်မှာ ဒီလိုဖြစ်နေအောင် ကြိုးစားပီး အတုခိုးမယ်ဗျာ .. ကျေးဇူးပဲ …
Operation တစ်ခု ကို အောင်အောင်မြင်မြင် ကိုင်တွယ်ခြင် ရင် ဒီလို မှပဲ အောင်မြင်နိုင်မှာ ပါ..
ကျုပ်တို့ဆီမှာ ဒီပုံမှာ ပါသလို ကော်ဖီခွက် များချပေးလိုက်လို့ ကတော့ ခွက် နဲ့ကောက် ပေါက် မှာ အသေအခြာ ပါပဲ…
ငါ အကြီးအကဲ ဆိုတာ ပေါ်လွင် အောင် ထိုင်ခုံ တောင်မှ သူများထက် အမှီလေးဖြစ်ဖြစ် သာရမှ…
Policy သမားက Policy ပဲဖြစ်သင့်တယ် ….. ခုတော့ဖြင့် တကယ် လုပ်ကိုင် နေတဲ့သူ တွေကို သူလောက် မတတ်ဘူးဆိုပြီး ကျယ်နေတဲ့ အဝတ်ပြောင်း လူကြီးတွေ နဲ့ ဘေးက ဝိုင်းမြှောက်ပေးနေတဲ့သူတွေကတော့ မြင်နေရတုံးပါပဲ….
သူတို့နိုင်ငံမှာစစ်ဆင်ရေးလုပ်တာ TV Game ကစားနေသလိုပဲ။ လွယ်လိုက်တာ။
တို့များလည်းအားကျပါရဲ့…. မတတ်နိုင်သေးလို့ပါနော် တတ်နိုင်တဲ့တစ်နေ့ကျရင်…….ဟင်းဟင်းးးးးး
အဘနီ ဟင်းဟင်းးးးးးးးးးး ထမင်း မပါဘူးလား။
အခန်းဖွဲ့စည်းပုံကို ကြည့်ပါဦး။ ခမ်းခမ်းနားနား ပြင်ပြင်ဆင်ဆင်လည်းမရှိ။ သမ္မတရော အားလုံး အဆောင်အယောင်လည်း မရှိ။ အခန်းကလည်း တံခါးဖွင့်ထားပြီး တံခါးဝကနေ ရပ်ကြည့်နေကြတာတွေလည်း ရှိရဲ့။
ရုရှားသမတ မယ်ဗီဒက် US ကိုရောက်တုံးက အိုဘားမားနဲ့ စားသောက်ဆိုင်မှာ စကားပြောနေကြတဲ့ပုံ ဂျာနယ်ထဲမှာ တွေ့ ခဲ့ဖူးပါတယ်၊အဆောင်အယောင်မရှိ။လက်နက်ကိုင်အစောင့်မရှိ၊ဘေးစားပွဲက စားနေတဲ့သူတွေကလည်း အရေးတောင်မစိုက်ဘူး၊
ပြည့်ချင်တဲ့အိုးက ပြည့်တာပဲ… ဘောင်ဘင်ခတ်ချင်တဲ့အိုးက ဘောင်ဘင်ခတ်ချင် ခတ်တာပဲ…
သူတို့ပဲ ကြည့်နေကြတယ် .. တို့ကျတော့ မပြဘူး…
သင့်အေးရိပ် on အင်္ဂလိပ်စကား ပြောတတ်လိုသော် (၁၄) Learn to speak English (14)
manawphyulay on အင်္ဂလိပ်စကား ပြောတတ်လိုသော် (၁၂)
manawphyulay on ပိုက်ဆံရှာပါ
kai on မြန်မာ့ဂဇက်အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – မေ ၂၀၂၁
kai on A DOCTOR’S NOTE ON VACCINES
kai on အိမ်တွင်းအလှဆင် အပင်လေးများ – Go Green
Mon Lay on အင်္ဂလိပ် စကား ပြောတတ်လိုသော် (၁၀) Learn To Speak English (10)
Mon Lay on အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်လိုသော်(၉) Learn to speak English(9) – မျိုးကျော်မြင့်
zaw lin on လက်တွေ့နဲ့ ရေးတဲ့စာ
kai on Happy New Year 2021
Mon Lay on မချစ်မမုန်း အကောင်းဆုံးတည်း…
Mon Lay on သမီးကို သိစေချင်သော ရင်ထဲက စကားများ
Mon Lay on အဂၤလိပ္စကား ေျပာတတ္လုိေသာ္(၆) – ပါေမာကၡမ်ိဳးေက်ာ္ျမင့္
aye.kk on သူတို ့ဆီကချစ်စရာ့သ္မီးပျိုကလေးများ…
Mon Lay on အသေးစား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ အတွက် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အချက်များ
manawphyulay on ကနြောျရိုကျမိခဲ့သော….၁
Mon Lay on အဖြူရောင်ကြိုးလေးတစ်မျှင် (ဒုတိယပိုင်း)
Shar Thet Man (119508 Kyats )